repositories ကနေ install တာထက် compile လုပ်တာကဘာကြောင့်ပိုကောင်းတာလဲ Linux မှ
repositories ကနေ install တာထက်ဘာကြောင့် compile ရတာပိုကောင်းတယ်
asdf adda | | သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ဒီလမ်းညွှန်စာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ဟာ (ဆော့ဝဲလ်စင်တာ၊ Yumex, Pacman စသဖြင့်) ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းထက်၎င်းရဲ့ source code မှပရိုဂရမ်တစ်ခု (Firefox, Vlc, etc) ကိုရေးဆွဲခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့်ပိုကောင်းသည်ကိုရှင်းပြရန် (သင်ပေးရန်) သွားမည်။ install လုပ်ပါ။
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည်သီအိုရီကိုလိုက်နာကြသည်။
1 "compile" ဆိုတာဘာလဲ။
2 အဘယ်ကြောင့် "compile" ပိုကောင်းသလဲ?
Compiling သည် source code (အချို့သောပရိုဂရမ်ဘာသာစကားဖြင့်ရေးသားထားသော C၊ C ++ စသည်ဖြင့်) စသည်တို့ကို code ကို binary နှင့် assembler သို့ပြောင်းလဲရန်ပရိုဆက်ဆာကို သုံး၍ ပရိုဂရမ်၏ပရိုဂရမ်တစ်ခုအဖြစ်အသွင်ပြောင်းသည်။ ။ ၎င်းကိုထုပ်ပိုးခြင်းဟုလည်းခေါ်လေ့ရှိသည်။
အဘယ်ကြောင့် "compile" ပိုကောင်းသလဲ?
ပထမ ဦး စွာသင်သည်အဘယ်ကြောင့်နားလည်ရန်အောက်ပါသိရန်ရှိသည်။ Processor (Pentium, Core, Atom, etc) နှင့် ၄ င်း၏မျိုးစိတ် (Intel, AMD, ARM စသည်တို့) သည်“ ရေနံစိမ်း” (ရိုးရှင်းသော၊ အလွန်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသော) နည်းလမ်းများဖြင့်ဖော်ပြသည်။ သူတို့ရဲ့မော်ဒယ် (Core i7, Core i5, Atom x2, Phantom x8, Arm, etc) ၏ကုဒ်ကို process လုပ်ပြီး၎င်းတို့တွင်ရှိသည့်ယေဘူယျညွှန်ကြားချက်များရှိသည်။
Software Center / apt-get / Yumex / Yum / Pacman / etc မှတဆင့် repositories မှသင် download လုပ်သည့်အခါ၊ ကြိုတင် ဖြစ်နိုင်သမျှပရိုဆက်ဆာများ (Intel နှင့် Amd) ပေါ်တွင်လည်ပတ်ရန်အတွက်။ ၎င်းသည်ကြိုတင်စုဆောင်းထားသည့်ပရိုဂရမ်တစ်ခုအနေဖြင့်ထိုသီးခြားပရိုဆက်ဆာမော်ဒယ်၏ပုံမှန်ညွှန်ကြားချက်များဆုံးရှုံးသွားသည်။ (Firefox သို့မဟုတ် Chrome ကဲ့သို့သောပရိုဂရမ်တစ်ခုလျှင်ကုဒ်လိုင်း ၇ သန်းမှ ၈ သန်းကျော်ရှိပါကတစ်ခုချင်းစီအတွက်သီးခြားညွှန်ကြားချက်များကိုထည့်ရမည်ဟုထင်သည်။ စျေးကွက်အတွင်းတွင်ရှိသောပရိုဆက်ဆာများ၊ ကုဒ်နံပါတ်သည်အလွန်ကြီးမား။ ပရိုဂရမ်သည်ထိရောက်မှုမရှိတော့ဘဲ) ဖန်တီးသူအမှတ်တံဆိပ် (Intel, Amd, Arm) ၏အထွေထွေများသာကျန်သည်။
သင်ပရိုဂရမ်၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါ၊ unzip လုပ်ပြီး compile လုပ်သောအခါ၎င်းသည်တိကျသောညွှန်ကြားချက်များနှင့်စုစည်းထားသည် TU ပရိုဆက်ဆာ, (ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ကွဲပြားသောစက်တစ်လုံးဖြင့်စက်ပေါ်တွင်အလုပ်မလုပ်တော့ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်သင်၏ပရိုဆက်ဆာအတွက်အထူးသဖြင့်သက်သက်သာသာသာသာဖြစ်သည်)သင်၏ပရိုဆက်ဆာသည်၎င်း၏တိကျသောညွှန်ကြားချက်များကြောင့်ပေးစွမ်းနိုင်သည့်စွမ်းအားအားလုံးကိုထုတ်လွှတ်လိုက်သည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရဤအသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များသည်သင်၏ Motherboard ၏ chipset ဟုသိသည့်အရာများနှင့်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်သည်။ ၎င်းသည် Intel နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပရိုဆက်ဆာနှင့် Motherboard ကိုအဆင့်မြှင့်တင်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့အတွက် Intel အကြီးအကဲဖြစ်သည်။
ခင်ဗျားရဲ့စွမ်းအားကိုခင်ဗျားအံ့အားသင့်မှာပါ AMD Atom x2 သို့မဟုတ်သင့် အတွင်းပိုင်း Intel Core, Core2Duo, i3သင်၏ PC ဟောင်းမှစသည်တို့ Linux လောကတွင်နာမည်ကြီး Kernel (operating system ၏စိတ်နှလုံး) ကိုစုစည်းခြင်းအကြောင်းဘာကြောင့်များများပြောဆိုရတာလဲယခုသင်နားလည်ပါပြီ။ အကယ်၍ သင်သည်ကွန်ပျူတာတစ်ခုလုံး (အထူးသဖြင့်သင်၏ကွန်ပျူတာအတွက်ဂရပ်ဖစ်ပတ်ဝန်းကျင် (Gnome, Kde, etc), Kernel, အသုံးများသောပရိုဂရမ်များ (Firefox, Vlc, Chrome, Wine, etc)) ကိုစုစည်းထားပါကသင်ရရှိမည့်အမြန်နှုန်းနှင့်အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုသင်စုဆောင်းမည်ဆိုပါစို့။
သင်၏စက်အတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောကုဒ်တစ်ခုကိုရရှိရန်ဤစုစည်းမှုနိယာမသည် Gentoo နှင့်၎င်းမှဆင်းသက်လာသူများကဲ့သို့သော distros များအသုံးပြုသောစနစ်ဖြစ်သည် (ကျွန်ုပ်အကြောင်းကိုယခုပြောမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်သည် Fedora minimal ကို Gnome 3, kernel နှင့်အခြားပရိုဂရမ်များစုစည်းထားသည့်စနစ်) ကိုအသုံးပြုသည်။ ၊ သင်၏အသစ်ပြောင်းခြင်းများနှင့်သင်၏ပရိုဂရမ်များကိုအမြဲတမ်းစုစည်းထားသည်။
ငါအားသာချက်များအားလုံးကိုရှင်းပြပြီးပြီ။ သို့သော်စကြာ ၀ inာရှိအရာအားလုံးကဲ့သို့ပင်၎င်းတွင်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆန့်ကျင်နေသည်။
ဤအချိန်အတွက်လိုအပ်သောအချိန် (i7 4790K ပါသော Firefox (ကျွန်ုပ်သည်ဗို့အားနှင့်အလွန်ဆိုးသောကြောင့် overclock မပါဘဲ) ၃ မိနစ်ခန့်ကြာသည်။ Gnome-Control-Center နှင့်အတူ Gnome Shell (ဘားဘာမျှမပါ) သည်ကျွန်ုပ်ကို ၂ မိနစ်ခန့်အချိန်ယူပြီးစုစည်းထားသည်။ Fedora မှာတစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်ပေမယ့်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်တဲ့ Processor ရှိတဲ့စက်မှာဒီအချိန်ဟာအချိုးအစားမညီမျှတာရှည်ပါတယ်။
ပရိုဆက်ဆာသည်၎င်း၏စွမ်းအင်၏ ၁၀၀% ကို၎င်း၏အများဆုံး core များဖြင့်အများဆုံးအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်စားသုံးမှုနှင့်အပူမြင့်တက်မှု (သင် overclocking ရှိလျှင်သို့မဟုတ်၎င်းသည်အထူးသဖြင့် notebook တစ်လုံးဖြစ်လျှင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ) ထို့ကြောင့်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုပြင်ဆင်ရန်အဆင်ပြေသည်။ သို့မဟုတ်အခါသမယများအတွက်ကော်ဖီ။
သင့်တွင်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုသောစာကြည့်တိုက် (ကိရိယာ) ပျောက်ဆုံးနေပြီး၎င်းသည်စုစည်းခြင်းတွင်အမှားမဖြစ်နိူင်ပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့် distros အားလုံးတွင်ယင်းတို့ကိုရှောင်ရှားရန်၎င်းတို့တွင် packets များသို့မဟုတ်အစုံများရှိသည် (၎င်းတို့သည်စာကြည့်တိုက်အမျိုးမျိုးနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူဖြစ်သင့်သည်ကဲ့သို့ Kernel ကိုဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည့်အခြားအရာများဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသည်) ။
Debian အတွက် (Ubuntu, Mint, Elementary စသည်) စသည်တို့သည် ၄ ​​င်းတို့မှဆင်းသက်လာသောအရာများဖြစ်သဖြင့်၎င်းကိုလိုက်နာပါ
ဒီနေရာမှာ kernel မဟုတ်ဘဲသာမန်အသုံးပြုရန်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုရေးဆွဲနေခြင်းဖြစ်သည်။
aptitude install - တည်ဆောက်မှု - မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော dh - make devscripts သည် fakeroot debhelper debian - ပေါ်လစီ ccache dh - autoreconf autotools - dev build - dep ardor
Debian-policy ကိုကျွန်ုပ်ထည့်လိုက်သည်၊ သို့သော်သင်၏ distro သည် Debian မဟုတ်လျှင်၎င်းသည်အထုပ်မရှိပါကအမှားတစ်ခုဖြစ်ပါက၎င်းကိုလျစ်လျူရှုပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဤစနစ်များကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာမသုံးထားကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်တစ်စုံတစ်ရာသောကုန်ပစ္စည်းများသည် repositories တွင်မရှိတော့ပါကပြaနာမဖြစ်စေရ။
sudo yum -y ကို kernel-headers install လုပ်ပါ
ဒီနေရာမှာမှန်ကန်သောစုစည်းမှုပြုလုပ်ရန်ဒီ distros (သို့) သက်ဆိုင်ရာ package များကိုမသိသောကြောင့် Arch (ကျွန်ုပ်သည် distro ကောင်းစွာမသိပါ) နှင့် OpenSuse ကိုသုံးသောသူများအတွက်တောင်းပန်ရပေမည်။ (ကွန်ယက်ပေါ်တွင်ရှိသောအရာများကိုကျွန်ုပ်အတည်မပြုရသေးသောကြောင့်) သူတို့နှစ်ခုအတွက်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာငါမသိဘူး) ။
ယခုသင်၌လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များအားလုံးရှိနေပြီဖြစ်ရာသင် terminal ကို အသုံးပြု၍ unzip ပြုလုပ်သည့် extension ပေါ် မူတည်၍ သင်စုစည်းလိုသောပရိုဂရမ်၏ source code ကိုသာ download လုပ်ရန်လိုအပ်သည် (စိတ်မပူပါနဲ့၊ ငါသင်ကို command များချန်လှပ်သည်) နှင့်သင်သွားသည့်အခါ folder (အမြဲတမ်း terminal နှင့်အတူ) သင်အတူတူလုပ်ပါ အောက်ပါ:
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုရွေးချယ်ရန်နှင့်အခြားသူများကိုသင်ကိုယ်တိုင် configure လုပ်နိုင်လျှင်
နောက်ဆုံး program ကိုသင်၏ linux တွင်ထည့်သွင်းရန်
ဤအရာအားလုံးကိုအမြဲတမ်း root ဖြင့် (Fedora မှ su၊ Ubuntu ရှိ sudo su နှင့်၎င်းမှဆင်းသက်လာသောအရာများ (Mint, Elementary Os, etc)
Terminal ကို အသုံးပြု၍ unzip လုပ်ရန်အမိန့်များ (ဖိုင်ကိုဖိုင်ရှိသောဖိုင်တွဲတစ်ခုတွင် unzipped လုပ်ထားသည်):
.Tar ဖိုင်များ (tar) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - အထုပ် | tar cvf file.tar / file / * Unpack | tar xvf file.tar အကြောင်းအရာကိုကြည့်ရန် | tar tvf file.tar
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .tar.gz - .tar.z - .tgz (ကတ္တရာစေးနဲ့ gzip) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် zip | tar czvf archive.tar.gz / archive / unpack and unzip | tar xzvf file.tar.gz အကြောင်းအရာကိုကြည့်ရန် (မထုတ်ယူပါ) | tar tzvf file.tar.gz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .gz (gzip) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Compress | gzip -q ဖိုင် (ထိုဖိုင်သည် "file.gz" ကိုချုံ့။ နာမည်ပြောင်းသည်) Unzip | gzip -d file.gz (ဖိုင်သည်၎င်းကို unzips လုပ်ပြီး၎င်းကို "file" အဖြစ်ထားပေးသည်မှတ်ချက်။ gzip သည်ဖိုင်တွဲများကိုမဟုတ်ဘဲဖိုင်များသာချုံ့သည်။
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .bz2 (bzip2) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Compress | bzip2 ဖိုင်ကို bunzip2 ဖိုင် (ဤဖိုင်သည် "file.bz2" ကိုချုံ့ပြီးအမည်ပြောင်းသည်) Unzip | bzip2 -d file.bz2 | bunzip2 file.bz2 (ဤဖိုင်သည်၎င်းကိုဖြည်ချပြီး၎င်းကို "ဖိုင်" အဖြစ်ထားရှိမည်) မှတ်ချက် - bzip2 သည်ဖိုင်တွဲများကိုမဟုတ်ဘဲဖိုင်များကိုသာချုံ့သည်။
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .tar.bz2 (tar နှင့်အတူ bzip2) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Compress | tar -c ဖိုင်များ bzip2> file.tar.bz2 Unzip | bzip2 -dc file.tar.bz2 | tar -xv | tar jvxf file.tar.bz2 (tar ၏နောက်ဆုံးပေါ်မူကွဲ) အကြောင်းအရာကိုကြည့်ပါ bzip2 -dc file.tar.bz2 | tar -tv
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .zip (zip) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Compress | zip file.zip / Mayo / archives zip ဖိုင် unzip file.zip အကြောင်းအရာကိုကြည့်ရန် | unzip -v file.zip
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .rar (rar) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Compress | rar -a file.rar / may / archives Unzip | rar -x file.rar အကြောင်းအရာကိုကြည့်ပါ rar -v file.rar | rar -l file.rar
ထိုအားလုံးပါပဲ။ Buenos Aires မှအာဂျင်တီးနားမှကြိုဆိုနှုတ်ဆက်သည်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်အားလပ်ရက်များနှင့်နှစ်သစ်များ! :)
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » repositories ကနေ install တာထက်ဘာကြောင့် compile ရတာပိုကောင်းတယ်
စုစည်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပြproblemနာမှာ၎င်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အလုပ်မလုပ်သောကြောင့် ပို၍ ပင်ပန်းပါသည်
compiling လုပ်တဲ့ပြသနာကသင့်မှာကွန်ပျူတာအဟောင်းနဲ့အကန့်အသတ်မရှိရင်တိုးတက်မှုဟာသိသာထင်ရှားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အထူးအသုံးပြုမှုရှိတဲ့ကွန်ပျူတာမှာ option တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်မှာ i7 compile ရှိရင်အတူတူပါပဲ။ အဲဒါကအဆင်ပြေပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကပိုမြန်ပြီးပိုကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တွက်ချက်ထားလို့ပါပဲ။ Intel atom ပါ ၀ င်သည့် pc တစ်ခုအနေဖြင့်၊ compiling မှအပိုစွမ်းအင်ကိုသင်တကယ်လိုအပ်သည် မှလွဲ၍ အဆင်မပြေပါ။ သို့သော်အားနည်းသောပရိုဆက်ဆာနှင့်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုစုစည်းရန်အချိန်များစွာကြာနိုင်သည်။
ငါလုံးဝသဘောတူသည်။ အချိန်တိုအတွင်းမှာသင့်မှာစာကြည့်တိုက်ကင်းမဲ့နေသည်၊ ၎င်းကိုရှာဖွေပြီးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထပ်မံရင်ဆိုင်ရတော့မည်ဆိုတာရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကျွန်ုပ်သည်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ အလွန်ရှားပါးသည်။ xD
Muy interesante ¡!
အကယ်၍ သင်သည်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုစုစည်းထားပါကနောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံမှုများမည်သို့လုပ်ဆောင်သနည်း။ သူတို့ကအလိုအလျောက်လား၊ ဒါမှမဟုတ်ဗားရှင်းအသစ်ထွက်ရှိမရှိသတိထားရမလား။
အန်တိုနီယို Campos ဟုသူကပြောသည်
သင်က၎င်းကိုကိုယ်တိုင်မွမ်းမံရန်လိုသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာအခြားတစ်ခုဖြစ်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်မူကွဲကိုပြုစုသည်၊ “ အားနည်းချက်” ဖြစ်သည်ဆိုပါစို့၊
Antonio Campos ကိုပြန်ပြောပါ
မွမ်းမံမှုများမတည်ရှိပါကအမှန်တကယ်တွင် Linux ဖြန့်ချိမှုနှင့်၎င်းတို့၏ကွဲပြားခြားနားသောဆော့ဝဲလ်ကိုထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာအထုပ်မန်နေဂျာများသည်အသစ်ပြုပြင်ခြင်းတစ်ခုချင်းစီအတွက်ပြန်လည်စုစည်းခြင်း (နှင့်မှီခိုမှုများကိုဖြေရှင်းခြင်း) အတွက်အဆင်မပြေမှုကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
မည်သည့်စာမျက်နှာမှမဆို source code ကို download လုပ်၍ compile လုပ်လျှင်၎င်းကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပြီးသင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုလေ့လာရန်လိုသည်။
အခုသင်၌ Gentoo (သို့) port အချို့နှင့် distro ရှိလျှင် repositories မှအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ပေးသည်။
Gentoo တွင်သင်၏ package manager, Portage သည်မွမ်းမံမှုများနှင့်မှီခိုမှုများကိုဂရုစိုက်သည်။ ငါသည်အခြား distros အပေါ်မသိရပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်, update ကိုတစ်ခုချင်းစီကိုသိသာတဲ့ recompiling ပါဝငျသညျ။
ငါတတ်နိုင်သမျှအားလုံးကိုစုဆောင်းသည့်အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ငါငြီးငွေ့လာသည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်စက်လည်ပတ်ချိန်တွင် (၄၅ မိနစ် kernel အတွက် ၁၀ မိနစ်၊ ခရိုမီယမ် ၁၀ မိနစ်) နှင့်ယင်ကောင်ပေါ်ရှိပြfixနာများကိုဖြေရှင်းရန်အချိန်ကုန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ခြင်းကိုမတွေ့ရှိခဲ့ပါ၊ အရာရာအားလုံးအတူတူပင်ဖြစ်သည်ဟုခံစားမိသည်။ ဤအကြောင်းများကြောင့်ယခုငါကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်အရာအားလုံးကိုအသုံးပြုသည်။ အားလုံးချက်ချင်းပင်နှင့်ပandိပက္ခမရှိဘဲဖြစ်သည်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်အများကြီးသင်ယူခဲ့ပေမဲ့ gentoo use သုံးချင်ခဲ့တယ်
တောင်မှ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အနည်းငယ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အရာဖြစ်သော်လည်း၎င်းကို apt ကဲ့သို့သောစနစ်များမှစုစည်းနိုင်သည်။ တည်ဆောက်မှုအလံတစ်ခုကို apt-source နှင့် voila တွင်ထည့်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒီမတိုင်ခင်မှာ compilations လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ package ကို install လုပ်တယ်၊ မဟုတ်ရင်အဲဒါကအလုပ်မလုပ်ဘူး။ အဲဒါဟာပိုပြီးတိုက်ရိုက်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံဖြစ်ပြီးအဆင့်အနည်းငယ်သာပါ ၀ င်သော်လည်း၊ installation ကိုပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ပဲ install လုပ်ထားတယ်၊ မှီခိုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အထုပ်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
၎င်းတွင် apt-build လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်မှီခိုများကိုမစုစည်းဟုထင်သော်လည်းကြိုတင် compile လုပ်ထားသော binaries များကို install လုပ်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ပြီးနောက်၊ ငါစဉ်းစား မိ၍ မတွေးနိုင်၊ အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်လုံးဖတ်ပြီးနောက်စိတ်ကူးကိုအကြိမ်တစ်ထောင်လောက်သွားပြီး Gentoo … Gentoo, မင်းဘယ်မှာလဲ။
စုစည်းထားခြင်းသည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်၊ အချို့သောအင်္ဂါရပ်များကိုခံစားနိုင်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ခြင်းသည်အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော်လည်းအချိန်နှင့် "လက်ရှိလိုအပ်ချက်များ" ကိုသူတို့အသုံးမပြုနိုင်သောကြောင့်ခွင့်မပြုနိုင်သောအရာများဖြစ်သည်။
စာကြည့်တိုက်များနှင့်ဗားရှင်းပြောင်းလဲမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်အချိန်များစွာဖြုန်းတီးမည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အလယ်၌တစ်ခုခုလိုအပ်ကောင်းလိုလိမ့်မည်။ ထိုနောက်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်လိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်ပါက aptitude ကိုယ်တိုင်၊ uprmi နှင့် zypper ကိုကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်ပြီးသည်နှင့် compiling လုပ်ရန်တကယ်အသုံးချပါက။
၃ မိနစ်မီးလျှံမြေခွေး! ။ ။ ဆိုလိုတာက ၃၀ လား။
၄ င်းမှာကျွန်ုပ်၏ gentoo ကို 8350G fx4.5 နဲ့အတူခဏတာယူခဲ့ပါတယ်။
$ genlop -t firefox | အမြီး -n3
Sat ဒီဇင်ဘာ620:00:00 2014 >>> www-client ကို / firefox-34.0.5-r1
အချိန်ပေါင်းစည်း: 16 မိနစ်နှင့် 35 စက္ကန့်
Processor တစ်ခုချင်းစီအတွက်သီးခြားဖော်ပြသောညွှန်ကြားချက်များကို mnemonics ဟုခေါ်ပြီး microprocessor တွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရအကောင်အထည်ဖော်သည်။ သူတို့သည်စက်၏ဘာသာစကားဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ပရိုဂရမ်သည်အနည်းဆုံးပမာဏနှင့်ကန့်သတ်ထားရန်လိုအပ်သည်။ အဲ့ဒီ microprocessor တွေအားလုံးမှာ support လုပ်တဲ့ common mnemonics ဟာအစွမ်းထက်ဆုံး microprocessor တွေရဲ့အစစ်အမှန်စွမ်းရည်ကိုဖြုန်းတီးပစ်ခဲ့တယ်။
ဤသည်မှာကုမ္ပဏီများနှင့် gnu / linux binary distros များပြုလုပ်သည်။
7gb RAM ရှိတဲ့ Intel i4790 18K နဲ့ကျွန်တော့်အတွက်တော့ငါပြောခဲ့တာတွေကိုငါယူသွားတယ်
သင်၌ရှိနေသောမိုက်ခရိုသည်သာလွန်ကြောင်းကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်၊ သို့သော်ခြားနားချက်မှာအလွန်ကြီးမားသည်၊ အမှန်တရားသည်အမြန်နှုန်းဖြင့်ဆာဗားနားဖြစ်ရမည်။ ၎င်းသည်လက်ဖြင့် compiling လုပ်သည့်အခါ configure options များနှင့်တူညီသောမှီခိုမှုများသို့မဟုတ် USE များနှင့်ဆက်စပ်သောအရာတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်သည်။
သေးငယ်တဲ့အသေးစိတ်ပြောရရင် 18GB of Ram ကို i7 ကလွဲလို့ပြောစရာမလိုဘူး။ လူတိုင်းမှာအဲဒီစက်မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့်သင်က benchmarking လုပ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်ခြားနားချက်ကသိသာထင်ရှားသည်။
နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာ Intel သည် Intel ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်မော်ဒယ်နှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲအကောင်းဆုံး floating point ရှိသည်။
မှန်ပါသည်၊ စုစည်းသည်မှာငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသည်။ သို့သော်သင်သည် Makefile များ၊ စာကြည့်တိုက်များစသဖြင့်ငြင်းပယ်ခြင်းဖြင့်သင်ခန်းစာများစွာရရှိသည်။ ဒါဟာအကြိမ်စုံတွဲတစ်တွဲပင်လုပ်ဖို့ကောင်းလှကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်။ Tanrax ကိုးကားရတဲ့အကြောင်းပြချက်အတွက်ကြိုတင်ရေးဆွဲထားတာအားလုံးကိုကျွန်တော်သုံးတယ်။
အဲရစ် carvajal ဟုသူကပြောသည်
လုံးဝအသစ်သောဗားရှင်းပရိုဂရမ်များကိုစုစည်းရန်ကြိုးစားရာ၌ကျွန်ုပ်ယေဘုယျအားဖြင့်ကြုံတွေ့ရသောပြproblemနာသည်အမြဲတမ်းမှီခိုမှုများကြောင့်ဖြစ်သည်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် (နောက်ဆုံးမူကွဲများသို့) အားလုံးကိုစုစည်းပြီးသင်လိုချင်သောအရာကိုပြုစုနိုင်ခြင်းကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။
PATH ပြproblemsနာများနှင့်အလွှာများသည်အရာအားလုံးကိုစုစည်းရန်မလိုအပ်သောအရာများဖြစ်သည် (ကျွန်ုပ်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တတ်နိုင်သလောက်လုပ်သည်) ။ မှီခိုမှုများကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပေးသောကိရိယာတစ်ခုမှာအောက်ပါဝဘ်ဖြစ်သည်။ http://www.linuxfromscratch.org/ -
#LinuxFromScratch သည် system ပေါ်တွင်သင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော source code ကို compile လုပ်ရန်“ step-by-step” ညွှန်ကြားချက်များကိုထောက်ပံ့ပေးသောစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ (ကျွန်ုပ်စုဆောင်းရန်လိုအပ်သည့်အရာများ၏ ၉၈% သည်ကျွန်ုပ်အားဤအရပ်မှလမ်းညွှန်ခြင်းနှင့်တဖြည်းဖြည်းသင်ယူခြင်း) ရရှိခဲ့သည်။
ကောင်းသည့်အချက်တစ်ခုအနေဖြင့်0မှစနစ်တစ်ခုကိုစုဆောင်းခြင်းသည်အထူးသဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပတ်ဝန်းကျင် (သို့) ဆာဗာများအတွက်အခြားအရာများအကြားစိတ် ၀ င်စားစရာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်များသောအားဖြင့်အရာအားလုံးကိုအမြဲတမ်းတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းပြုလုပ်သောကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာကဲ့သို့ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ပါ။ အသုံးပြုမှုလျှောက်လွှာများဤအမျိုးအစားအတွက်ရရှိသောနိမ့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အလွန်အရေးကြီးပါသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအပြင်) ကျနော့်အမြင်။
ဤအချက်များသည်ယနေ့ခေတ်တွင်ပြောဆိုခြင်းနှင့် "ပညာရှင်များ" ကိုသာစီမံခန့်ခွဲခြင်းအလွန်နည်းပါးသည့်အချက်များဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့လိုအပ်သည့်သင်ခန်းစာများကို၎င်းတို့နေ့စဉ်သင်ကြားပေးရသည်မှာစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ သို့မှသာနေ့စဉ်ပါ ၀ င်ဆောင်ရွက်နေသောမတူကွဲပြားသောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများသို့ကူညီပံ့ပိုးပေးသူများစွာကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် Gnu / Linux အချိန်မီဆက်လက်တည်ရှိနေသည်သာမက၎င်းသည်ယခုအထိအလုပ်လုပ်နေပြီဖြစ်သော်လည်းအပြီးသတ်သုံးစွဲသူများကိုသာပိုင်ဆိုင်ရန်မှာမကျန်းမာပါ။
Erick Carvajal ကိုပြန်ကြားပါ
Rabuda လင်းယုန် ဟုသူကပြောသည်
ငါ့ကိုထပ်တိုးခွင့်ပြုပါ ဤနေရာတွင်သင်တင်ပြသောအားသာချက်များကိုရရှိရန်လူသိများသော make.conf ကိုကောင်းစွာပြင်ဆင်ရမည်။ ပရိုဆက်ဆာမိသားစုနှင့်စုစည်းအလံများကိုထိုနေရာတွင်ပြသည်။ ထိုနည်းတူစွာဤနေရာ၌သင်စုစည်းနေစဉ်အတွင်းအသုံးပြုရန် cores အရေအတွက်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏ mic ၏ cores များအားလုံးကိုအသုံးပြုသောအခါစုဆောင်းချိန်သည်အကြီးအကျယ်လျော့နည်းသွားသည်။
Aguila Rabuda အားပြန်ကြားပါ
အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါး။ ငါလည်းဥပမာတစ်ခုကြိုက်ခဲ့သည်။ တိုက်ရိုက်ချင်သည်။ archlinux တွင်မည်သို့စုဆောင်းရမည်၊ သို့မဟုတ် AUR ကိုမည်သို့မည်ပုံသုံးစွဲရမည်ဟူသောပို့စ်တစ်ခု။ Mendoza ကနေနှစ်သစ်ကူးမင်္ဂလာ။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်က ... ငါ kernel ကိုအမြဲတမ်း compile လုပ်ခဲ့ပေမယ့် 40min: / anyway ကိုစောင့်ဆိုင်းရတာအရမ်းငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းတယ်။ ဗီဒီယိုဒရိုင်ဘာ မှလွဲ၍ ဘာတစ်ခုမှ (အထူး configurations များအတွက်) အချိန်ကြာမြင့်စွာမပြုစုနိုင်ခဲ့ပါ။
ဆောင်းပါးကအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဆရာမရှိဘူး၊ ထုပ်ပိုးပြီးပြုစုတယ်ဆိုတာအတူတူမဟုတ်ဘူး။ ) ..
c4explosive ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းသော post ကို။ အချို့သောပရိုဂရမ်များစုစည်းခြင်းကိုကျွန်ုပ်သဘောတူသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံ၌၎င်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်စက်ကိရိယာကိုတစ်ခါတစ်ရံငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသည်။ သို့သော်၎င်း မှလွဲ၍ အထူးသဖြင့်စာကြည့်တိုက်များသို့မဟုတ်အထုပ်များလိုအပ်သောအခါများစွာသင်ယူနိုင်သည်။
base-devel: Archlinux အတွက်သင့်အနေနဲ့ compile လုပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်
Pacman -S အခြေစိုက်စခန်း - က devel
အချက်အလက်များသည်အလွန်ကောင်းသော်လည်းအမှန်တရားမှာ compile လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်သာမာန်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးဤကဲ့သို့သောအလုပ်မျိုးကိုလုပ်လိုလျှင်၎င်းကိုမထိပါနှင့်။ ပြုစုခြင်းဟာငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းပါတယ်၊ အမြဲတမ်း၊ မင်းမှာစာကြည့်တိုက်တစ်ခုပျောက်ဆုံးနေတယ်၊ ​​ပြproblemနာတစ်ခုဒါမှမဟုတ်တစ်ခုကြုံတွေ့ရတယ်၊ အရာခပ်သိမ်းတတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်၊ မင်းရဲ့အချိန်ကိုယူနိုင်အောင် minecraft server ကိုပြုစုဖို့ပြောပါ။ update တစ်ခုသို့မဟုတ် patch တစ်ခုသို့မဟုတ်ထွက်လာတိုင်းအချိန်တိုင်း xd ကိုပြန်လည်စတင်စုဆောင်းသည်
အတိအကျဆိုရလျှင် compiling သည်သင်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည့်အလွန်တိကျသောပရိုဂရမ်များအတွက်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အရာရာကို compiling လုပ်သည်၊ သင်ပြောသည့်အတိုင်းအမြဲတမ်း update များရှိသည်။ ငါသာ lts kernels အကြံပြုလိမ့်မယ်။
ယနေ့လူအများအသုံးပြုသောပရိုဆက်ဆာအားလုံးနီးပါးသည်တူညီသောညွှန်ကြားချက်များကိုထောက်ခံသည်။ ထို့ကြောင့်စုဆောင်းခြင်းသည် kernel နှင့် server ကဲ့သို့သော system တစ်ခုတွင်သာလျှင်အဆင်ပြေသည်။ ၎င်းမှာကြိုတင်တွက်ချက်ထားသည့် package များမရှိလျှင်၊ ဒါကအချိန်ဖြုန်းတီးခြင်းပဲ
John Mere ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းကောင်းပါ ၀ င်ပံ့ပိုးမှု၊ ကျွန်ုပ်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သည်ကိုကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါမည်။ ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်သည် repositories မှထည့်သွင်းသောအချိန်အများစု (နီးပါး) ...
အသေးအမွှားလေ့လာမှု - rar command command options များသည် unscripted ဖြစ်၍ bunzip2 သည် unzips သာဖြစ်သည်။
Juan Mera အားစာပြန်ပါ
ငါစုစည်းနိုင်ခဲ့တာက debian wheezy အတွက် kernel ဖြစ်ပြီး ၂ နာရီလောက်ကြာတယ် (ငါမှာ amd e2 450 Ghz dual-core CPU ရှိတယ်) ။ ဒါကြောင့်ငါ gentoo ကိုမတပ်ဆင်ရဘူး၊ စနစ်တစ်ခုလုံးကိုစုစည်းပြီး download လုပ်ဖို့အချိန်က ၁၈ နာရီလောက်ကြာလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တွင်ပြproblemနာမရှိလျှင်၎င်းသည်စုဆောင်းရန်ပိုကောင်းသည်၊ သို့သော်အချိန်အများစုမှာအလွန်များနေပြီး၎င်းသည်မထိုက်တန်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ သင်မြန်နှုန်းမြှင့်တင်မှုရှိသော်လည်း၎င်းသည်သိပ်မများလှပါ။ တစ်နေ့မှာမင်းမှာ CPU ပရိုဆက်ဆာတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုလျှင် gentoo o ကို install လုပ်မည်
လျှို့ဝှက်ကြံစည်မှုများ (သို့) တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက slackers များသည်၎င်းသည် compile လုပ်ခြင်း၊ binary ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ package manager (တပ်ဆင်ထားမှုများကိုသိသာထင်ရှားစေခြင်း၊ slapt-get၊ swaret, slackyd နှင့် / သို့မဟုတ်အခြားသူများ) ကိုထည့်သွင်းခြင်းအတွက်သဘာဝကျသည်ဟုရှုမြင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့နှင့်ဘာမျှမဖြစ်သကဲ့သို့အိမ်အကြောင်းကိုရေးသားခြင်းသို့မဟုတ်ကွမ်တမ်ရူပဗေဒရေးဖို့ဘာမျှမဖြစ်သကဲ့သို့။
3MB RAM ပါသော P750 192MHz တွင်မငြိမ်သက်ဘဲ DVD တစ်ခုကိုကြည့်ခြင်းသည် Slackware ကိုကျော်။ မရနိုင်ပါ။ ငါကသက်သေပြ, ထိုသို့ Gentoo ပြုစုခြင်းထက်ပိုမြန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါကအတူတူမဟုတ်ဘူး၊ ငါလည်း Gentoo ကိုသုံးတယ်။
သုံးစွဲသူများအကြားကွာခြားချက်မှာသုံးစွဲသူများက“ ငါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းမယ်” လို့ပြောတယ်။ ဟက်ကာက“ ငါမှာဝက်အူလှည့်နဲ့မိနစ်အနည်းငယ်ရှိတယ်” လို့ပြောတယ်။
နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်သော i7 နှင့် 18 Gb ram နှင့်အတူ compiled packages နှင့် binaries အကြားခြားနားချက်ကိုသင်မည်သို့သတိပြုမိသနည်း။
Self-compiling packages များ၏သင့်လျော်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အမြဲတမ်းမုန်းတီးသော်လည်း၊ လက်ရှိ desktop ပတ်ဝန်းကျင်တွင်၎င်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်အလွန်ရှုပ်ထွေးသည်။ အထူးသဖြင့်မှီခိုမှုများရှုပ်ထွေးမှု၊ မွမ်းမံမှုများနှင့်အခမဲ့မဟုတ်သောအရင်းအမြစ်များအပေါ်များစွာမှီခိုမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာဒရိုင်ဘာများကဲ့သို့ပင်လုပ်ဆောင်မှုသည်မည်သည့်ရှုထောင့်ထက်မဆိုများစွာလွှမ်းမိုးနိုင်သည်မှာသေချာသည်။
Gnome3ကသာ၎င်းကိုရေးသည် (ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသော packets များ၏အမည်များကိုနာမည်ဖြင့်ပြောရမှာပါ)၊ shell (bar)၊ gnome-control-center (ပြီးပြည့်စုံသည်၊ မှီခိုမှုများနှင့်စသည်)၊ အချိန်နှင့် shell ကိုအလုပ်လုပ်ရန်အဘို့အအကြောင်းကို2သို့မဟုတ်3မှီခို။ ရှင်းနေသည်မှာ shell သည်၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးအလုပ်လုပ်ရန်အတွက်မှီခိုမှုများစွာလိုအပ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အခြားသူများနှင့် GDM ကို compile လုပ်စေသည်။ shell ကို compile လုပ်သည်နှင့်၎င်းကို GConf နှင့်ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုငါပြင်ဆင်သည်။
ငါ (terminal မှတဆင့်) log in လုပ်တဲ့အခါ precompiled ကို install လုပ်တဲ့အချိန်ထက်ပတ်ဝန်းကျင်က load လုပ်ဖို့အချိန်အများကြီးနည်းပါတယ်။ လေထုထဲတွင်အချိန်ကိုပစ်ချ, precompiled လမ်းအတွက်ငါက shell ကို load လုပ်ဖို့3သို့မဟုတ်4စက္ကန့်ယူထင် (နောက်ခံပုံပြသထားတဲ့အတွက်5နှင့်အတူ, ငါကဤမျှကာလပတ်လုံးယူအဘယ်ကြောင့်ငါနားမလည်ဘယ်တော့မှကြောင့်ငါထင်သောကြောင့်ကားမောင်းသူနှင့်အတူ GT 630 ကိုကျွန်တော်ရေးထည့်လိုက်သည်နှင့်ချက်ချင်းရေးသည်။ X org စတင်သည်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို load လုပ်သည်။ (preload နှင့် prelink ပါသောကြောင့်သူတို့ကိုကျွန်ုပ်ပိုမိုမြန်ဆန်အောင်လုပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်ထင်သည်မှာ၎င်းတို့သည် cache သို့ရောက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်) https://www.google.com.ar/search?q=preload+y+prelink+fedora&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=iXaqVPykO4qYNpbTgdAP )
i7 တွင် ss4 နှင့် ss3 ညွှန်ကြားချက်များရှိသည်၊ အချက်အလက်များသည် distros အမျိုးမျိုးမှ generic builds များမှလျစ်လျူရှုထားသည် (debian builds 486, ubuntu 686 အတွက်) သည်သင့်အား 20 နှစ်အရွယ်ပရိုဆက်ဆာကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးပမ်းနေသည့်ဟာ့ဒ်ဝဲကိုဖြုန်းတီးမည့်အချိန်ကိုသိနိုင်သည်။ ငါ့ရဲ့ pentium အဟောင်းကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း“ proprietary driver” လိုအပ်လျှင် kernel သည်တိကျသော firmware ကို compiler time တွင်တင်နိုင်သည်။ xorg နှင့်အတူပိုပြီးလိုက်တယ်ကိစ္စများ။
Fabian Alexis ဟုသူကပြောသည်
သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ သင်ယူရန် (သို့မဟုတ်ပြန်လည်လေ့လာရန်) အမြဲတမ်းကောင်းပါသည် (:
Fabian Alexis အားပြန်ပြောပါ
Gentian မှဝမ်းမြောက်စွာ Debian 🙂
နောက်ထပ်အားနည်းချက်တစ်ခုမှာ terminal မှ compilation သည် Linux နှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတရှိသူသို့မဟုတ်သိပြီးဖြစ်သောသုံးစွဲသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ ပရိုဂရမ်များ၏စုစည်းခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းမဟုတ်သော်လည်းအသေးစိတ်အားဖြင့်စီမံသောဂရပ်ဖစ်ကိရိယာရှိသလား။
Yuan six သို့ပြန်သွားပါ
Calculate linux ကအဲဒီလိုလုပ်တာက graphoo tools တွေပါတဲ့ Gentoo ပဲ။ Phoronix တွင်သူတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းကိုအကြံပြုသည်။
ငါ linux အသုံးပြုသူပါ၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာကျွန်ုပ်သိုလှောင်ရာမှပရိုဂရမ်တစ်ခုကို install လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာပရိုဂရမ်၏ဗားရှင်းအဟောင်းများတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ အသစ်သောသူများသည်ဒီအကန့်အသတ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိသောကြောင့်မည်သို့စုဆောင်းရမည်ကိုသိခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ရှားပါး distros များ။
ပို့စ်တွင်ဖော်ပြထားသောအရာအားလုံးသည်အဆင်ပြေပါသည်။ ကျွန်ုပ်မှန်ကန်သည်ကိုကျွန်ုပ်သံသယမရှိပါ။ သို့သော် binary package တစ်ခုကို install လုပ်ခြင်းနှင့်သင်ကိုယ်တိုင် compile လုပ်ခြင်းအကြားစွမ်းဆောင်ရည်ကွာခြားချက်သည်သုံးစွဲသူအတွက်မမြင်နိုင်သောအရာဖြစ်သည်။
နှင့် compiling ၏အားနည်းချက်များကိုအများအပြားဖြစ်ကြပြီးသူတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသုံးပြုသူမှသိသာလျှင်။ ထို့ကြောင့်ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ compile ဖို့ခြေလှမ်း။
ငါ kernel ကို compil လုပ်တဲ့အခါစွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးကိုသတိထားမိခဲ့တဲ့နေရာမှာ AMD 64 ပရိုဆက်ဆာပါတဲ့လက်တော့ပ်မှာရှိနေတယ်။ Factory kernel နဲ့ compile ကြားအပြောင်းအလဲကရက်စက်တယ်။
အခုကျွန်တော့် system မှာ factory kernel ရှိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေဒီမှာပြောနေတာတွေအားလုံးအားလုံးနီးပါးကိုပြုစုပြီးငြီးငွေ့လာတယ်။
အခုအချိန်မှာငါဟာသေးငယ်သောဆာဗာကိုသုံးရန်သို့မဟုတ် emulators များနှင့်ကစားရန်စသည့်အရေးကြီးသည့်အရေးကြီးသည့်ပရိုဂရမ်အချို့ကိုသာစုစည်းခဲ့သည်။ မကြာခင်မှာပဲငါ mame version ကိုဘယ်လိုရေးသားရမလဲဆိုတဲ့ post ကိုရေးခဲ့တယ်။ သင်၏ပရိုဂရမ်သည်သင်၏ system အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်သည့်အခါသတိထားမိသည်။
ငါ gentoo distro ကိုစမ်းကြည့်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ဘယ်လိုတိုးတက်သလဲဆိုတာကြည့်ဖို့လိုသည်။
ငါထည့်ရန်မေ့လျော့, အချိန်ကြာမြင့်စွာယူသောသူများ, မိနစ် 30 ကျော်မိနစ်, အချိန်လျော့နည်းအတွက်လုပ်ဖို့အများအပြားလှည့်ကွက်ရှိပါတယ်။
အဲဒီလှည့်ကွက်တွေထဲကတစ်ခုကသင်၏ပစ္စည်းကိရိယာများရဲ့ module တွေအများဆုံး၊ အများဆုံး module ၇၀ ကိုသာစုစည်းရန်ဖြစ်သည်၊ သင့်ကိုသင်ပေါ်လာသည်။ iptables ၏ထောက်ခံမှုကိုလိုအပ်ချက်အားလုံးနှင့်ပေါင်းထည့်လိုက်လျှင်၊ ၎င်းသည် module ၃၀၀ အထိတိုးလာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ လာပါ၊ 70-odd modules ကိုစုဆောင်းခြင်းထက်များစွာသာလွန်သည်။ ကိန်းဂဏန်းများကိုစက်ရုံမှဖြစ်စေ၊ သူတို့ပြောသကဲ့သို့ဖြစ်စေ vanilla မှစုဆောင်းသည်ဆိုပါကလက်ရှိအလုပ်လုပ်နေသည့်ကိန်းဂဏန်းသည်ပိုကောင်းသည်။
သင်၏ system တွင်လက်ရှိ kernel ကမည်သည့် module များကိုအသိအမှတ်ပြုသည်ကိုသိရှိရန်သင့်အားကူညီမည့် program သည် "localmodconfig" သို့မဟုတ်ဤလမ်းကြောင်းကို "streamline_config.pl" ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်၊ လမ်းကြောင်းရှိ / လမ်းကြောင်းအတွင်းရှိ kernel ရင်းမြစ်လမ်းညွှန်အတွင်း၌တွေ့နိုင်သည်။ / »
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်၏ USB devices အားလုံးနှင့်ချိတ်ဆက်ထားကြောင်းသေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။ kernel သည်သင်၏ module များအားလုံးကိုအသိအမှတ်ပြုသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းသည် compiling ကိစ္စသာဖြစ်သည်။
Kernel သည်အလွန်ပေါ့ပါးပြီး system ထဲတွင်လတ်ဆတ်သောလေကောင်းလေသန့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည် system ၏ startup နှင့် shutdown ပိုမိုမြန်ဆန်စေသည်။
ဘဝကမလွယ်ကူလှပါ။ cmake (သို့) အခြားအရာတွေကိုသုံးတဲ့ပရိုဂရမ်တွေရှိပြီး၊ အရာရာကိုအသစ်ပြောင်းပြီးစုစည်းထားတာတွေကိုသိမ်းထားဖို့အချိန်ယူရတယ်။ ဒီလို CPU မျိုးရှိရင်မင်းကိုဘာထူးခြားမလဲ။
သင်သိမ်းဆည်းထားသည့်ရင်းမြစ်များနှင့်အတူဖိုင်တွဲကိုသိမ်းဆည်းရမည်။ သင်ဖယ်ရှားလိုသောအခါ root execute အနေဖြင့်ရင်းမြစ်များနှင့် terminal မှအရင်းအမြစ်ဖိုင်တွဲသို့သွားရမည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကြီးလေးသော distro တိုင်းတွင်လက်ဖြင့်စုစည်းထားသော packets များကိုသီးခြားစီတပ်ဆင်ထားသည်။ in / usr / local / bin သည် / usr / bin မဟုတ်ပါ၊ distro ၏ package manager သည်၎င်းတို့ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ထည့်သည်။ ဘာမှရောယှက်နေသည်
ဆောင်းပါးသည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည့်အရာများပေါ်ပေါက်လာစေသော်လည်း၊
« code ကို binary နှင့် assemble သို့ပြောင်းရန်အတွက်အသုံးပြုသောဘာသာစကားပြောင်းလဲခြင်းအတွက် PROCESSOR ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏လည်ပတ်မှုအတွက် executable program တစ်ခုတွင်။ ၎င်းကိုထုပ်ပိုးခြင်းဟုလည်းခေါ်သည်။
မှား။ Compiler ကိုအမှန်တကယ်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အချို့သောပရိုဂရမ်ဘာသာစကားတစ်ခု၏ညွှန်ကြားချက်များကို၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောစည်းဝေးရာဘာသာစကားသို့သွားပြီး၎င်းကိုစက်ဘာသာစကားသို့ပြန်ဆိုရန်ဖြစ်သည်။
Assembly Language သည်ချစ်ပ်၏မှတ်ပုံတင်တွင်ပါ ၀ င်သောညွှန်ကြားချက်အုပ်စုကိုထင်ဟပ်စေသောထူးခြားသောမှတ်ဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပရိုဂရမ်၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်များကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်၊ ဖြုတ်။ compile လုပ်သည့်အခါ၎င်းသည်သင်၏ပရိုဆက်ဆာ၏တိကျသောညွှန်ကြားချက်များနှင့်စုစည်းထားသည်။
ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုရေးဆွဲသောအခါ၎င်းသည်ဗိသုကာနှင့်သက်ဆိုင်သောညွှန်ကြားချက်များဖြင့်သာပြုလုပ်လိမ့်မည်။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီအနေနှင့်သက်ဆိုင်ရာပရိုဆက်ဆာတစ်ခုအတွက်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်သက်ဆိုင်ရာ compiler အလံများကိုသက်ဝင်စေရမည်။
Kernel ကိုရေးသားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မှတ်ချက်ပေးသည်နှင့် ပတ်သက်၍:
သင် kernel ကို compile လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံး ၀ င်ကောင်းရှိကောင်းရှိကောင်းရှိနိုင်မယ့်အင်္ဂါရပ်များကို activate or deactivate လုပ်ဖို့ရှာဖွေနေသည်။ ၎င်းသည် execload load ၏အရွယ်နှင့်အမြန်နှုန်းတွင်သေချာပေါက်ထင်ဟပ်မည်မဟုတ်။
dh-make, devscripts, fakeroot, debhelper, debian-policy ccache dh-autoreconf autotools-dev build-dep
ဤပရိုဂရမ်များသည်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုရေးဆွဲရန်မလိုအပ်ပါ။ gnu / linux တွင်ပရိုဂရမ်များကိုစုစည်းနိုင်ရန်အတွက်ပရိုဂရမ်များကိုရေးသားရန်ကြိုးစားနေစဉ်ပရိုဂရမ်ဘာသာစကားအရေအတွက်သည်သင့်အားမည်သည့်ကိရိယာများတပ်ဆင်ရမည်ကိုသေချာမသိရန်တားဆီးထားသည်။ သင်ပြုလုပ်လိုသောပရိုဂရမ်၏စာရွက်စာတမ်းများနှင့်သာဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်သင်သိနိုင်သည်။ သင်ဖော်ပြသောပရိုဂရမ်များသည်ရေးသားခြင်းမပြုနိုင်သောသို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည်မဟုတ်သောပရိုဂရမ်တစ်ခုကို DEBIANIZE နှင့်ထုပ်ပိုးရန်အသုံးပြုသည်။
ဒီဆောင်းပါးမှာပါ ၀ င်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာစိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးနေဆဲဖြစ်တယ်။ သူတို့အားလုံးကိုဖြေရှင်းရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါးသည်သိပ္ပံမဂ္ဂဇင်းအတွက်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်နိဒါန်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်သာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ရေးသားထားသည့်ဝေါဟာရများတွင်အတွေ့အကြုံရှိသူတစ် ဦး သည်သော့ချက်သဘောတရားများကိုနားလည်ရန်အတွက်နက်ရှိုင်းစွာလုံလုံလောက်လောက်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ အကယ်၍ ပညာသင်ကြားပါကအင်တာနက်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်အရာ၏လေးပုံသုံးပုံသည်အချည်းနှီးသာဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသိပ်ကိုဝါသနာမပါပါနဲ့။ ၁၀၀% ဆောင်းပါးကိုသဘောတူရန်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပါရဂူဘွဲ့ကိုအကဲဖြတ်နေသကဲ့သို့“ နည်းပညာ” အရည်အသွေးကိုအစဉ်မပြတ်အကဲဖြတ်လို့မရပါ။
ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားသူအားကျွန်ုပ်အပြည့်အ ၀ ထောက်ခံသည်
လွတ်လပ်ခွင့်ကိုနှစ်သက်သူများသည် rar အစား rar များကို RAR အစား unar ကိုသုံးရန်ကောင်းသည်။ ( https://packages.debian.org/jessie/unar )
ငါဒီပြwithနာနဲ့အတူ bug ကိုနှိပ်လိုက်တယ်။ ငါ google ကိုစရှာဖွေတယ်။ ဒါပေမယ့် ubunto 14.04 amd64 bits အောက်မှာ firefox ကို compile လုပ်ဖို့သင်ခန်းစာရှာမရဘူး။ မဟုတ်ရင်ဒီညမှာအောက်ပါသင်ခန်းစာနဲ့ kernel ကိုရတယ်။ http://www.redeszone.net/2014/11/28/como-instalar-el-ultimo-kernel-de-linux-en-ubuntu-14-04-lts/
ဆောင်းပါးကောင်း, ငါအများကြီးလေ့လာသင်ယူတယ်။ ဒါပေမယ့်ဥပမာအားဖြင့်ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာများကဲ့သို့အရင်းအမြစ်များစွာသုံးစွဲသောသီးခြားအစီအစဉ်အချို့အတွက်သာဖြစ်သည်။ လေးစားပါတယ်
Carlos Ferra ကိုပြန်သွားပါ
ဒီဆောင်းပါးနဲ့ Gentoo မှလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကသူတို့ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ Gentoo ကကျွန်တော့် PC မှာ install လုပ်ဖို့သွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက Sabayon ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည် installation လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေပြီးအရင်းအမြစ်မှ compile လုပ်ရန်အခြေခံထားရှိရန်ဖြစ်သည်။ Sabayon (သို့) Ubuntu နဲ့ငါ့ရဲ့ Laptop ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည် (ဒီအချိန်ကငါရင်ခွင်ရှိခဲ့တယ်) ရဲ့ခြားနားချက်ကိုသတိမပြုမိပါဘူး။ ဒါကြောင့်၎င်းကိုတပ်ဆင်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သော Arch ကိုဖျက်ပစ်ခြင်း၏အလုပ်အားလုံးကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မချန်မထားမသိပါ။ ပရိုဂရမ်တစ်ခုလျှင်မီလီစက္ကန့်အနည်းငယ်တန်သင့်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသေချာပါ။
gentoo ပါ ၀ င်သည့် pcs ၄ ခုအနက်မှ archlinux ပါသောမှတ်စုစာအုပ်ကိုထပ်ထည့်သည်။ Systemd သည်ကျွန်ုပ်ကိုငြီးငွေ့ပါသည်၊ ၎င်းကို startx ဖြင့်အသုံးပြုခဲ့ပြီးပြီဖြစ်သောကြောင့်နောက်ဆုံး update တွင် cores နှစ်ခုလုံးသည် ၈၅% ကိုအသုံးပြုသည်။ ဘာမှမရှိဘူး၊ ငါသုတေသနလုပ်နေတယ်၊ ​​ပြီးတော့ systemd ထဲမှာပါးလွှာပြီးမိုက်မဲတဲ့ပရိုဆက်ဆာကိုစားဖို့တစ်ခုခုပြောင်းလဲသွားပုံရတယ်။
လုံလောက်ပါတယ်၊ Arch နဲ့လုံလုံလောက်လောက်ရှိခဲ့တယ်၊ အဲဒါနှစ်လကျော်ကြာပြီ။ နှစ်နှစ်ကျော်ပြီ။ အခုငါ gentoo ကို install လုပ်နေတယ်။ ငါ stage3 testing update အတွက်သွားမယ်၊ ဒီညအတွက် fries ပါတဲ့ openbox သွားလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါးကောင်းတယ်၊ ငါ့ကိုငါ Qupzilla ကိုစုဆောင်းစေချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် sempron လေးနဲ့ရက်တွေကြာလိမ့်မယ်။ ငါသိပ်မကြာသေးဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကမကောင်းတဲ့ခံစားချက်ပဲ။
Manuel Aponte ဟုသူကပြောသည်
နောက်ထပ်စုစည်းမှု၏အားနည်းချက်တစ်ခုမှာ update တစ်ခုရှိသည့်အခါ update ကိုထပ်မံတပ်ဆင်ပြီး install လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်အချို့သောပရိုဂရမ်များသည်တိုးတက်မှုသံသရာတိုသောကြောင့်၎င်းတို့အတွက် update များကိုမကြာခဏထုတ်ပေးသည်။ ၃ လအထိ၊ ဤအရာအားလုံးနှင့်အတူပေါ့ပေါ့ပါးပါးအသုံးပြုသူသည်ပျင်းလာပြီးအဆက်မပြတ်အသုံးပြုသူသည်သူ၏ system ကိုနောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မီစေရန်အချိန်များစွာကုန်ဆုံးသည်။
Manuel Aponte အားပြန်ပြောပါ
ဘယ် application တွေကို compile လုပ်ဖို့ပိုထောက်ခံသလဲဆိုတာငါသိချင်တယ်။ ၎င်း၏အသုံးဝင်မှုအရသိရသည်ကြိမ်နှုန်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှု update ။
Aleix Pol မှ ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်စုစည်းရန်လိုအပ်ပါကသင်မှားယွင်းစွာဖြန့်ဖြူးသောစနစ်ကိုအသုံးပြုနေသည်။ အခြားသူများ၏အမှားများကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောပြုပြင်မှုအတွက်လဲလှယ်ရန်တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်မှာသင့်အားနှေးကွေးစေရန် debugging ရွေးစရာများထည့်ရန်ဖြစ်သည်။
သင်၏ system သည် -O3 လိုအပ်သောကြောင့်နှေးကွေးသည်မဟုတ်၊ ၎င်းသည် disk သို့အလွန်အမင်းဖတ်နေခြင်းသို့မဟုတ်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်အလွန်အကျွံပန်းချီခြင်းပရိုဂရမ်တစ်ခုရှိသောကြောင့်၎င်းသည်နှေးသည်။
ကျွန်ုပ်၏ထောက်ခံချက် - ကျွန်ုပ်တို့၏ system ကို micro-optimize လုပ်မည့်အစားကျွန်ုပ်တို့အားလုံးရှိသည့် software တိုးတက်စေရန် community တစ်ခုအဖြစ်လုပ်ကြပါစို့။
Aleix Pol အားပြန်ကြားပါ
စုဆောင်းမှုကိုမည်သို့ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်ကိုသင်ရှင်းပြပြီးပြီမဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့် Gentoo USE ရွေးစရာများကိုထုတ်လုပ်ထားသောကုဒ်များကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ရန်အသုံးပြုသည်၊ ပရိုဆက်ဆာကိုလည်းဖော်ပြရန်လိုသည်။ UBUNTU / Debian or Arch မှာဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားသလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များကိုဖတ်ရှုခြင်းမရှိခြင်း၌ကျွန်ုပ်သည် Linux ၌လေ့လာသူတစ် ဦး ရှိသည်။
ကျွန်ုပ် Fedora 20 ကိုအသုံးပြုပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တွင်ကျွန်ုပ်၏စက်အတွက်စုစည်းရန်ဥပမာ - Firefox browser ကို install လုပ်ထားပြီးပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ထပ်မံ ado မသုံးဘဲပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။ ဆိုလိုသည်မှာကုဒ်အောက်တွင်၎င်းကို compile လုပ်ပါ။ ငါအသစ်တစ်ခုကို compile လုပ်ဖို့ download လုပ်ပါပြီ
Linux kernel နဲ့တူတူပဲ။
ငါက kernel မလိုအပ်ဘူးလို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် GRUB မှာထည့်သွင်းရမယ်။ firefox နဲ့အတူ firefox ၂ ခုရှိမယ်ဆိုတာငါမသိဘူး၊ ငါကိုယ်တိုင်ပဲ kernel ၁ ခုသာ firefox တစ်ခုပဲရချင်တယ်။
ငါ့ဘဝမှာငါပြုစုခဲ့တဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကတော့ Musique ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဗားရှင်းဖြစ်တယ်။ ငါဒီ app ကိုတကယ်ကြိုက်တယ်၊ အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အချိန်ယူရကျိုးနပ်တယ်။ ငါလိုသုံးစွဲသူတွေအတွက်တော့ငါပြီးသွားရင်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုခံစားရတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Slackware ကိုအသုံးပြုသည်။ application များကိုပြုစုခြင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်။
စနစ်အားကြိုတင်ပြုစုထားပြီးဖြစ်သော ISO မှတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ သင်တရားဝင်ရုံးရှိသင်အသုံးပြုနိုင်သောကြိုတင်ပြုစုထားသည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များမှာနည်းသည်။ ငါ Gentoo အလုပ်လုပ်ပုံကိုဘယ်လိုပုံဖော်ရမလဲဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျစုဆောင်းပါ။
သို့သော်၊ SlackBuilds ပရောဂျက်သည် third-party applications များအတွက် scripts များ (တရားဝင် distro နှင့်ဆင်တူသည်) ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်၊ သင်ကသင်တပ်ဆင်လိုသည့်အရာ၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုကူးယူပြီး၎င်းနှင့်နောက်ပိုင်းတပ်ဆင်ထားသည့် tgz သို့မဟုတ် txz package တစ်ခုသို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အဆိုပါ distro ၏တရားဝင်အထုပ်မန်နေဂျာ။ ထို့ကြောင့်၊ အားသာချက်မှာ configure, make, install install များကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ရှားခြင်းနှင့် package ကို update လုပ်ခြင်း၊ ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်၍ အလွန်လွယ်ကူစွာဖြစ်သည်။
အားနည်းချက်မှာ Slackware တွင်မှီခိုမှုများကိုအခြား distros များကဲ့သို့အလိုအလျောက်မဖြေရှင်းနိုင်သောကြောင့်သင်လိုအပ်သောမှီခိုမှုကို ဦး စွာပြုစုပြီးသင်နောက်ဆုံးတပ်ဆင်လိုသည့် application ကိုပြုစုရမည်။ ငါအသုံးပြုသောစုစည်းထားသောပရိုဂရမ်များသည် LibreOffice၊ Texmaker, Spyder, Qt5, QtCreator, VLC, Wine, GRASS, QGis မှဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာနှင့်၎င်း၏လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ စုစည်းခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းသည် ၅ မိနစ်မှနာရီပေါင်းများစွာအထိကြာနိုင်သည်။ သို့သော်သင်လိုချင်လျှင်အချိန်ကိုချွေတာရန်ကြိုတင်စုစည်းထားသည့်အထုပ်ကိုရှာပြီးသုံးနိုင်သည်။
ငါ compiled နှင့် precompiled packages များအကြားကွာခြားချက်အများကြီးရှိပါတယ်ရှိမရှိစစ်ဆေးရန်အချိန်မရှိဘူး, ဒါပေမယ့်ငါ့ system ကိုအလွန်တည်ငြိမ်သည်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်၏လက်တော့ပ်မှာထူးခြားမှုသိပ်မရှိပါဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၎င်းသည်အစွမ်းထက်မှုမရှိ၊ i3 ပရိုဆက်ဆာနှင့်4GB RAM ပါရှိသည်။
ကျွန်ုပ်သည်လက်ရှိတွင် Funtoo ကိုအသုံးပြုသည်။ ရိုးသားစွာပြောရလျှင်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုရေးသားခြင်း (သို့) ကြိုတင်တွက်ချက်ထားသည့်ပရိုဂရမ်ကိုတပ်ဆင်ခြင်းတို့ကြားစွမ်းဆောင်ရည်ကွာခြားချက်ကိုကျွန်တော်မတွေ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ပညာရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာရည်ရွယ်ပါသည်။ ငါ debian ကိုသုံးပြီးတစ်ခုခုကိုလုပ်ချင်တဲ့အခါငါကအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်တယ်။
Make -j3 (core + + နံပါတ်)
ငါalíenကိုသုံးတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက compile လုပ်ထားတဲ့ program ရဲ့ binary ကိုဖန်တီးလိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်မင်း system ကို binary တစ်ခုလို install လုပ်လို့ရတယ်။ ဒါဆို uninstall လုပ်ချင်ရင် synaptic (သို့) အခြား package manager ကိုရိုးရိုးလေးသုံးလို့ရတယ်။ ဒါက package ကိုဖန်တီးခြင်းနှင့် install လုပ်ခြင်းရဲ့အားသာချက်ပဲ။ "make install" လုပ်မည့်အစား
ငါတိုးတက်လာသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အနည်းဆုံးကြီးမားသောနှင့်လေးလံသော packets များ၊ ဥပမာအားဖြင့် Funtoo ရှိ Libreoffice သည် Debian ထက်အချိန်ပိုယူသည်၊ VLC နှင့်သို့မဟုတ် mpv, MKV FullHD နှင့် multi-audio ဖိုင်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်၊ အများကြီးပိုမြန်။
အပြောင်းအလဲကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်မှာအခြားတစ်ခုမှာ Firefox ဖြစ်သည်။ Debian တွင်ကျွန်ုပ်၏ PC နှင့် tab 10 ခုသို့မဟုတ် ၁၅ ခု နှိပ်၍ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသည်။ သို့သော် Funtoo တွင်ကျွန်ုပ်သည် ၃၀ အထိဖွင့်ထားနိုင်ပြီး၎င်းသည်ဘာမျှမဖြစ်ဘဲသိုး၏စားသုံးမှုသည်များစွာနည်းပြီးလျော့နည်းသွားသည်နှင့်အမျှဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ JS ဖိုင်များကိုအေးခဲစေရန်အတွက်အချို့သောအလုပ်များနှင့်ပရိုဂရမ်များမည်သို့မည်ပုံလုပ်ဆောင်သည်ကိုနောက်ခံပေါ်တွင်မူတည်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
Marco Sarmiento ဟုသူကပြောသည်
ပြproblemနာက precompiled ကိုကူးယူလိုက်သောအခါမည်သည့် linux distro ကိုမဆိုအကြမ်းဖျင်းပြတင်းပေါက်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်
Marco Sarmiento အားစာပြန်ပါ
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစွာတိုးတက်ခြင်းထက်အထုပ်များကိုလိုချင်သောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်စုစည်းခြင်း၏အားသာချက်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်သည်။ ဥပမာ၊ သင့်တွင်ပရင်တာမရှိလျှင်သင် CUPS ကိုထောက်ပံ့မှုရှိသောအထုပ်များကိုစုစည်းထားခြင်းမဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် Hunspell ကို CUPS နှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲ compile လုပ်လျှင်၎င်းသည် CUPS ကိုအသုံးပြုသည်။ Gentoo - အနည်းဆုံး - make.conf ဖိုင်တွင်တည်ဆောက်ထားသော package များအတွက်ရွေးချယ်စရာများအားလုံးဗဟိုပြုသည့် "-cups"၊ အကယ်၍ KDE5 (Plasma 5) ကိုယခုအခါ၎င်းတို့ခေါ်ဆိုနေပါက KDE4အတွက်မှန်ကန်သော tags များဖြစ်သော်လည်း KDE4တွင်မလိုအပ်ဘဲ Desktop ပေါ်သို့ ported applications များဖြစ်သော "-kde", "-qt5" tags များကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ သင်မလိုအပ်သောမည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆို“ -Gtk” အစရှိသဖြင့်။ အကယ်၍ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုကြောင့်တိကျတဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခုလိုအပ်သည်ဆိုပါက GTK ဟုဆိုပါစို့။ package.use ဟုခေါ်သောဖိုင်တစ်ခုတွင် GTK ကိုအသုံးပြုသည်ကိုညွှန်ပြနိုင်သည်။ ဥပမာ Pidgin ကိုတူညီသောတံဆိပ်တပ်ထားသော်လည်းအနှုတ်လက္ခဏာမပါသော "gtk" »: « Net-im / pidgin gtk »။
ဤနည်းအားဖြင့်စနစ်သည်ရာပေါင်းများစွာ megabytes ပိုမိုပေါ့ပါး။ သေးငယ်။ ပိုမိုထိရောက်သော binaries များကိုမလိုအပ်သော code မရှိခြင်းအားဖြင့်ရရှိသည်။ ငါ Ubuntu မှ Gentoo သို့ Opensuse, Kubuntu, Debian, Arch, Chakra သို့မဟုတ် KaOS မှတဆင့်သွားပြီး Gentoo သည်ငါ၌အမြန်ဆုံးစနစ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သော ၇ နှစ်ကကဲ့သို့ပင် Core2Duo တူသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ညပေါင်းများစွာစုစည်းထားတာပါ၊ ဥပမာအားဖြင့် QT7 ကို compiling လုပ်ဖို့နာရီပေါင်းများစွာကြာတယ်။ အကယ်၍ သင်သည် Portage အတွက် "niceness" parameter ကို make.conf တွင်တပ်ဆင်ထားပါကသင်စက်နှင့်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်း package များသို့မဟုတ်အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီးအလွန်နှေးကွေးနေသည်ကိုသတိမထားမိပေ။ ဒါပေမယ့်ညစာစားချိန်မှာ install လုပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ် update လုပ်ဖို့အတွက်ထည့်ပါ။ အကယ်၍ လိုအပ်ရင်ညအိပ်ယာဝင်ပြီးထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော့်ကွန်ပြူတာဟောင်းက Kubuntu နဲ့ငါ့ရည်းစား I5 ထက်ပိုကောင်းတယ်။
နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်မှာအရင်းအမြစ်ဖိုင်များမှစုဆောင်းသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားသောအထုပ်၏လုံခြုံရေးသည်တတိယပါတီများကကိုင်တွယ်ခြင်းမပြုသေးသောမူလလုံခြုံရေးဖြစ်သည်။ Debian က install လုပ်ထားသော precompile သည်မူလအရင်းအမြစ်မှလာသည်ထက်အနည်းငယ်ပိုအာမခံပေးနိုင်မည့် build verification system ကိုအကောင်အထည်ဖော်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ သို့သော်ထို package ကိုကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ setup နှင့်အတူ compile လုပ်သောအခါသေချာမည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်တော့်အမြင်တွင်ခေတ်မီပရိုဆက်ဆာတစ်ခု၊ ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သော ratchet တစ်ခုနှင့်မတူသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်မြန်ဆန်မှုကိုတိုးမြှင့်လိုပါက RAM 8 GB သည် / var / tmp-Portage compilation အတွက်အသုံးပြုသောယာယီဖိုင်တွဲကို mount လုပ်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ Hard disk (သို့) SSD ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်သော RAM, ယနေ့ငါ precompiled packages များအသုံးပြုရန်အဓိပ္ပာယ်အများကြီးမမြင်ရပါဘူး။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ Firefox ကွန်ပျူတာသည် compile လုပ်ရန်မိနစ် ၄၀ ခန့်ကြာလျှင်၊ I40 (သို့) I5 အတွက်လက်ရှိစျေးကွက်တွင်မည်မျှကြာနိုင်မည်နည်း၊ ၅ မိနစ်၊ ငါက firefox အရင်းအမြစ်အကြောင်းပြောနေတာပဲ။ သူကအရမ်းနှေးနှေးစက်ရှိရင် Gentoo မှာ install လုပ်နိုင်တဲ့ကြိုတင်ပြုစုထားတဲ့ binary package တစ်ခုဖြစ်တဲ့ firefox-bin မဟုတ်ဘဲ - ဒီအကြောင်းပြချက်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးသောကြီးမားသော package များစွာရှိသည်။ - ။ ငါပြောလို့မရဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ့ရည်းစားကသူမကွန်ပျူတာကိုဟဲဟဲခွင့်မပြုဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါကအဲဒါကိုအသစ်ပြန်လည်ရန်မလိုအပ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါမှန်တယ်ဆိုရင်ငါဟာမိနစ်အနည်းငယ်ဖြုန်းတီးသင့်တယ်ထင်တယ်။ စနစ်တိုင်းတာရန်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကွန်ပျူတာကိုပိုမိုချိန်ညှိပြီးလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ထားပြီး၊ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်များသို့မဟုတ်အလွန်အဆင့်မြင့်သော Linux connoisseurs များအတွက်သိုထားထားပြီးဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်ချက်ကိုခြစ်ရာမှစပြီး Linux နည်းစနစ်များကိုမသုံးပဲမည်သည့်အရာကိုမဆိုအောင်မြင်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ပါ။
တစ်ခုတည်းသောအရာ« Amd Atom x2 »မတည်ရှိ
ni existira သည် intel ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်
သင် download လုပ်သောအရာကိုသတိထားပါ
Archlinux ရှိ Yaourt ၏လက်စွဲစာအုပ်